Otú nyefee Podcast si iPhone ka Computer
> Resource> iPhone> otú nyefee Pọdkastị site na iPhone ka a Computer
"M na-ebudatara a nso nke oge mmachi Pọdkastị m iPhone. Ebe ọ bụ na m na-zụtara a ọhụrụ kọmputa, ugbu a, m mkpa nyefee ndị a Pọdkastị si m iPhone ndị ọhụrụ na kọmputa maka ndabere. Bụla mfe ụzọ ime nke a? Biko nye m aro ụfọdụ? N'ihi na tupu oge eruo. "
-Amasị iji n'elu, anakọtara ụfọdụ dị oké ọnụ ahịa Pọdkastị na gị iPhone na ugbu a mkpa nyefee ha ka ha na kọmputa maka ndabere? -Eme ihe n'eziokwu, ị nwere ike adịghị adabere iTunes ime ọrụ ahụ. Ọ na-syncs Pọdkastị site na kọmputa na-iPhone, ọ bụghị ka ụzọ azụ. Iji nyefee Pọdkastị site na iPhone na kọmputa, ị pụrụ amasị agbalị Wondershare TunesGo, a ọkachamara iPhone ngwa ka ị nyefee Pọdkastị si iPhone na kọmputa. Gụọ ihe ndị na nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú idetuo Pọdkastị si iPhone na kọmputa na Wondershare TunesGo.
Download iPhone Pọdkastị na kọmputa transfer software ugbu a!
Wondershare TunesGo (Windows) & Wondershare TunesGo (Mac) ikpe nsụgharị nwere ike ibudata ebe a. Na-esonụ, anyị na-elekwasị anya na otú idetuo Podcast si iPhone ka PC. N'ihi na Mac ọrụ, biko gụọ ndu ịhụ otú e si eji TunesGo (Mac) ngwa.
Nzọụkwụ 1. Ngosipụta iPhone Pọdkastị na ngwá ọrụ
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na iPhone eriri USB na ẹkedori Wondershare TunesGo. A sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị, na ị na n'ezie ịhụ na gị iPhone na-gosiri na-amalite window. TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado fọrọ nke nta niile iPhones. Pịa ebe a na-ahụ ihe ndị a iPhones.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iPhone Podcast na kọmputa
Na window, pịa Media. Ekem, ke ọhụrụ window, ị pụrụ ịhụ Podcast n'elu. Pịa ya hụ ihe niile Pọdkastị na gị iPhone. Họrọ chọrọ Pọdkastị, na pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka". Họrọ "Mbupụ na My Computer" na ịzọpụta exported Podcasts. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ọganihu Ogwe maka ebufe Pọdkastị si iPhone na kọmputa.
Bingo! Ọ bụ ya! Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ Pọdkastị na-agafere si iPhone gị na kọmputa. Mgbe ebufe iPhone Pọdkastị na kọmputa, ị pụrụ iji TunesGo ka ihichapụ ndị a Pọdkastị na gị iPhone onwe elu ohere maka ndị ọzọ faịlụ.
Gbalịa Wondershare TunesGo free ikpe mbipute na kọmputa ugbu a!
10 Atụmatụ na usoro nke iPhone 6 na i nwere ike Chọrọ Ịma Banyere